ကေဇီနဲ့ MRT ပေါ်မှ အလွဲများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကေဇီနဲ့ MRT ပေါ်မှ အလွဲများ
ကေဇီနဲ့ MRT ပေါ်မှ အလွဲများ
Posted by ဇီဇီ on Sep 19, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 58 comments
စလုံးမှာ မြို့ပတ် ရထားကို အမ်အာတီ (Mass Rapid Transit) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လိုင်းတွေလည်း အများကြီးမို့ ဘယ်သွားသွား အဆင်ပြေတဲ့ ရထားတွေပါ။
လူကြပ်တဲ့ အချိန်ဆို နေရာမရပေမဲ့ လူချောင်ရင်တော့ လေအေးပေးစက်ပါတဲ့ အခန်းထဲထိုင်လိုက်ရသလိုမို့ အတော်သက်သာတယ်ခေါ်မှာပေါ့။
စလုံးများရဲ့ သိတတ်ချက်များကတော့ ထိုင်ခုံတွေ ရဲ့ ဘေးစွန်း ၂ ခုံ စီကို (Reserved Seats) ဆိုပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ အဖိုးအဖွားး ကလေးငယ်တွေ အတွက် သတ်မှတ်ထားတာပါ။
ဒါတောင် ထိုင်မိတဲ့ သူက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် ထ မပေးရင် လိုအပ်သူတွေမှာ ဒုက္ခရောက် ပါသေးတယ်။
အမြင်မတော်တဲ့လူက ဇွတ်သွားနှိုးရင် နှိုး၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားနေရာက သိတတ်တဲ့သူက ဖယ်ပေးရတာပါ။
ဟုတ်။ ဇာတ်လမ်းက ခုမှ စတာပါ။
တစ်ရက် စနေနေ့လည် လူချောင်နေတဲ့ အချိန် မြို့ထဲသွားချင်တာနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။
ရထားက ချောင်တယ် ဆိုပေမဲ့ ထိုင်စရာတော့ မရှိတဲ့ အနေအထားပါ။
ကေဇီက ထိုင်စရာမရှိလည်း မှီပြီး ဖုန်း သုံးလို့ ရတဲ့ နေရာရရင် အိုကေတဲ့သူမို့ အလယ်က တိုင်လေးကို ပဲ မညှာမတာမှီပြီး ဖုန်းကို ကလိလာတာပါ။
အဲဒီမှာ ရှေ့က သကောင့်သားကစူးစူးရဲရဲ လာလာကြည့်ပါတယ်။ အမှတ်မထင်မြင်ပြီးမှ သတိထားမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မသိမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး ပြန်ကြည့်တဲ့ အချိန်ကျ သူ့နေရာကို လာထိုင်ဖို့ မျက်ရိပ်ပြပါတယ်။ သူ ထ ပေးမယ် ပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်ကလည်း ရပါတယ် ဆိုပြီး လက်ကာပြလိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ ဆက်ရပ်ရမှာ စိတ်မသက်သာတာနဲ့ အစွန်းဘက်ခုံနားကို သွား ရပ် နေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ရီဆာတ် ခုံမှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က အိပ်လိုက်လာတာပါ။
အဲဒါကြောင့် စိတ်အနှောက်အရှက်မရှိ သူ့ရှေ့မှာ သွားရပ်မိတာပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ဘေးက အန်တီကြီးက ကောင်မလေးကို နှိုးပါတယ်။ ပြီးတော့ တရုတ်လိုတွေ ပြောပါတယ်။
ဘာတွေပြောမှန်းမသိပဲ ကြားထဲမှာ ကြားလိုက်ရတာက (Pregnant Lady) တဲ့။ အဟင့်။
အဲလာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိ ပဲ အဲဒီ ထိုင်ခုံမှာပဲ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ကိုယ့် လို ရာ ရောက်တဲ့ အထိ စီးဖူးပါကြောင်းးးးးး၊ ငါ့ နှယ်။
ဖြစ်ပုံက ကေဇီက စိတ်လွတ်လပ်တဲ့ အင်္ကျီမျိုးတွေ သိပ်ကြိုက်တာပါ၊ ပွပွပါးပါးလေးတို့၊ ခါးအောက်နားမှာ ဖောင်းပြီး ပြန် စည်းနှောင်ထားတဲ့ အင်္ကျီတို့ အရမ်းဝတ်တာပါ။
သူငယ်ချင်းတွေ စ တုန်း က ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်ဝတ်တာမှာ အဲဒီ အခေါက်ကတည်းက ထပ်မဝတ်ဖြစ်တော့ပါဘူးးးး
ကေဇီ မှတ်သွားပါပြီ။ နောက်မဝတ်တော့ပါဘူးးးး ထိုင်ခုံရချင်မှပဲ ဝတ်ပါတော့မယ်။ အဟိ။
နောက်တစ်လွဲက ရုံး အသွားမှာပါ။
ကေဇီရဲ့ ရုံးကို ရထား ၁ နာရီလောက် စီးရတာမို့ နားမှာ နားကျပ်ကြီးနဲ့ သီချင်းနားထောင်ပြီး ခေါ်မကြား အော်မကြား စတိုင်နဲ့ သွားတာပါ။
ပြီးလို့ နေရာရရင် ထိုင်ပြီး ငိုက်ပါတယ်။
တစ်နေ့ အဲလို ငိုက်နေချိန် လူကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လာတို့ တာနဲ့ လန့်နိုးပြီး သူ့ကို သွားကြည့်တာ သူပါလန့်သွားတယ်။ ဟိ။
သူ ပြောစရာရှိတဲ့ ပုံမို့ နားကျပ်ကို ချွတ်ပြီး နားထောင်လိုက်တဲ့ အချိန် တရုတ်လိုတွေ လာပြောပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း တရုတ်လို လာပြောရင် အင်မတန်မုန်းလို့ လားမသိ။ ခပ်တင်းတင်းပဲ တရုတ်လို နားမလည်ဘူးပေါ့၊။ ခပ်တင်းတင်းပဲ လက်ခါပြတာပေါ့။
အဲတော့ သူက ရှင်းပြတယ်။ သူ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကျပျောက်တာမှာ ရထားကတ်ပါ ပါ သွားတယ်ပေါ့၊ အိမ်ပြန်ဖို့ ယာယီ လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ ၂ ဒေါ်လာလောက် ပေးပါတဲ့။
အွန်!! အဲဒီ မှာ ကေဇီ ဒုက္ခရောက်ပြီ။
ခါတိုင်း အလို ဆို လူမိုက်အားပေးတယ် ပြောပြော ဘာပြောပြော၊ လိုတယ် ဆိုတဲ့ သူကို ကိုယ် အပန်းမကြီးဘူး ဆိုရင် ပေးမိမှာပဲ။
ခက်တာက များသောအားဖြင့် ကေဇီက ပိုက်ဆံ မကိုင်၊ ဒီမှာက ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ လွယ်တာရော၊ လက်ထဲရှိရင် အကုန်မြန်တာရောမို့။
အကြွေလေးချည်းထည့်ထားတဲ့ အိတ်က ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ။ အဲဒီ နေ့က ဝေါလက်ကိုပဲ ခါးကြားထိုးလာတဲ့ နေ့။
အဲဒါနဲ့ မျက်နှာထားကို ပြန်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် “မရှိဘူး။ ငါ ပိုက်ဆံမပါဘူးး” လို့။ အဲဒါမယုံသလို ခေါင်းကိုနောက်ဆုတ်ပြီးမှ ကို ကြည့်ပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ “တကယ် လားးးးး” တဲ့။ မယုံကြည်နိုင်တဲ့ လေသံနဲ့ မျက်လုံးးးးး။
ဒါကို ဒီက အမိုက်မက သူ့ကို စိတ်ဆိုးလို့ မပေးဘူး ထင်မှာဆိုးလို့ “တကယ်ပါ။ ငါ ဒီ နေ့ ပိုက်ဆံမထုတ်ရသေးဘူး” လို့ ဆက်ဖြေပါတယ်။
ဘာပြန်ပြောတုန်း ဆိုတော့ ” You do not have EVEN S$ 2, don’t you???” (၂ ဒေါ်လာ တောင် မရှိဘူး၊ အဟုတ်ကြီးလား) တဲ့။
သည်းခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကုန်သွားပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါနဲ့ ……………………….
(မလန့်ပါနဲ့။ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူးးးး ) ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ဝေါလက်ကို ဖွင့်ပြလိုက်တာပါ။
အဲဒီ တော့ မှ ဘေးက ထသွားပြီး မျက်စောင်းထိုးလောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီသွားတောင်းပါတယ်။ ဟိုက ပေးလိုက်တာလည်း မြင်ပါတယ်။ (အဲဒီနေရာမှ စီနီယာ စီဒီစင်တွေဆို မေးဦးမှာ မပြီးပါဘူးးး အငယ်တွေက နားအေးပြီးရော ပုံစံတွေပါ။)
ပြန်လာတော့ ကောင်းကောင်းပြန်မလာပါဘူးးးး ရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ပေစောင်းစောင်းးးးးးးးး၊ ဘေးမှာ ပြန်လာထိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမျက်နှာကို တောက်မြင်ကပ်လို့ ဖဲ့မလို့ စိတ်ရိုင်းနဲ့ ကြံပြီးမှ တကယ် ဒုက္ခရောက်တဲ့သူ ဆို မလုပ်သင့်တာနဲ့ ပြန်ပဲ ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ပဲ ဘယ်သူနဲ့ မဆို စိတ်ကို အဆုံးထိ ရှည်ထားပြီး ဖြေရှင်း/ရှင်းပြ/နားထောင်/စိတ်ဝင်စား နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကြီးနဲ့ အဲလို ခံရမှ ပြန်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ စိတ်ရိုင်းက မိတ်ဆွေတွေ ဆုံးရှုံးစေတာ ရန်သူတွေ ရတာ ခဏခဏမို့ပါ။
ခုတော့ လူတိုင်းကို ကိုယ့်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အရှက်မဖြစ်စေရဘူး ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နေသားကျအောင် နေနေတာမို့လည်း မပြောတော့ပါဘူးးးးး။ စိတ်လျှော့ခဲ့ပါတယ်။ ရှူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နောက်တစ်ခု က ကျနော့ အမလို ခင်ရတဲ့ အမ နေခြည်နဲ့။ မနှစ်က စလုံးမှာ မန်နေ့မန့် သင်တန်းတစ်ခု တက်ပါတယ်။ အမနဲ့က ခင်ကာစ၊ အိမ်ပြန်လမ်းတူလို့ ရထားတူတူစီးလေ့ရှိတာပါ။
အမနဲ့ က စကားပြောကောင်းလွန်းလို့ အိမ်ကို ဘယ်လို ပြန်ရောက်မှန်းမသိ၊ အချိန်ကုန်မှန်းမသိ စိတ်ပျော်ခဲ့တာပေါ့လေ။
အဲနေ့က အတန်းထဲ ဆရာက စာမေးပြီး ငြင်းခုံမိလို့ အပြန်လမ်းမှာ ကေဇီက စိတ်ပင်ပန်းနေတာပါ။ အဲဒါနဲ့ ချောင်ထဲက ထိုင်ခုံတစ်နေရာလွတ်လို့ အမက ဦးစားပေးပြီး ကေဇီကို ပေးထိုင်ပါတယ်။ (အမှန်ဆို အမ ကိုယ်လုံးက ကိုယ့် ထက်ဝက်လောက်ကို သူက ပြန်ညှာတာပါ။)။
ဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ မလေး ငနဲက ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ပြန်အိပ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်တာပေါ့လေ။
အမက မတ်တတ်၊ ကိုယ့်က ထိုင်ရက် ပတ်ဝန်းကျင်လဲ မကြည့်ပဲ သူက ကိုယ့်စိတ်ပြောင်းအောင် စကားပြောပေးလာတာပါ။
ခု ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီက ဘယ်ကဝယ်တာ၊ ဘယ်လောက်။
အလုပ်မှာ ထိုင်ရတာများလို့ ခါးတို့ ဗိုက်တို့မှာ အဆီစုတဲ့ အကြောင်းးးးး (အမတို့များ လူပိန်သလောက် အမူအရာပါ ပါတာဗျားးးးးး၊ ဟိဟိ)
ဒါနဲ့ ကိုယ့်က ပိန်တာ ဝတာ အပိုင်းရောက်တော့ တစ်ခုဝင်ပြောပါတယ်။
အမရယ်၊ အရင်က မန်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို တောင်ပြောမိသေးးး၊ ဒီ မျက်နှာပြည့်တာကို စိတ်ညစ်လို့ မျက်နှာကျချင်တာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး လို့။
နံပတ် ဖိုးရှုရင် မျက်နှာ ကျလို့ ရှူရမားးးး စဉ်းစားမိသေးတယ် ဘာညာ ဝင်ပြောမိတာ။ (အဲဒီ အချိန် အမ ဆင်းရမဲ့ ဘူတာကို ရောက်ခါနီးပါပြီ။ ကိုယ့်က နောက်တစ်ဘူတာပါ။)
အဲဒီမှာဗျာ ဘေးက သကောင့်သားက ခေါင်းကြီးထောင်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ” နံပတ်ဖိုး မရှုနဲ့၊ နံပတ် ဖိုက် ရှူ” တဲ့။
၂ ယောက်လုံး ကြက်သေသေပြီး ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်။ (ကိုယ်တွေက မြန်မာလို့ ထင်မထား…………)
အမကလည်း ကြားလိုက်ရတာ မသေချာလို့ ပါးစပ်လေး အဟောင်းသား နဲ့ “ရှင်” ဆိုပြီး မေးကြည့် ကြည့်နေမိသေးးးးး ။
ကိုယ်က ဂယောင်ဂရင် နဲ့ အတော်လန့်သွားတာ။
ဘူတာမှာလည်း ရပ်ရော၊ အမက ကိုယ့်လက်ပါ ဆွဲပြီး ပြေးဆင်းလာတာပါ။
ဘူတာမှ ရီလိုက်ရတာ လှိမ့်လို့။
ခုထိ မျက်နှာကျချင်တဲ့ အကြောင်း မစ ရဲဘူးးးး နံပတ် ဖိုက် ရှုရမှာ …. ဘာမှန်းမသိပဲ ကြောက်လွန်းလို့။ ငိငိငိ
လက်ဖွဲ့ရဖို့တောင် လွယ်ပါ့မလားကွယ် ၊
( စ တာနော် )
ကျော်မှ အနစ်နာမခံရင်…မလွယ်…အာဟိ…ကျော်ကအရပ်ကလဲ ငါးပေကိုး..အဖေကလဲ ရှမ်းကချင် ဆိုတော့ကာ..ရှမ်းသွေးလေးကလဲပါ…ရုပ်ကလဲ ဇက်အက်ဖရွန်ရုပ်…အဟီး …( ဟိုရှမ်းအပွေကို ကြည့်မရလွန်းလို့ကို အလွတ်ဝင်ညောင်တာ )
လက်ဖွဲ့ ပေးတဲ့ ချိန်ထိ မစောင့် နဲ့။
ခုပဲ လက် ဆောင်ပေးလိုက်တော့။ ခွိ
အဟီးဟီး….နံပါတ်ဖိုက်ရှုခိုင်းတဲ့ ငပြောင်ကရှိတေး..အဟီးဟီး ..ဘယ်လောက်တောင်ချစ်မွှေးပါနေသလဲမသိ…အဟိ
သူ ကယ်မှ ပဲ ရ မတဲ့။
အဲလို ကယ် မှာပဲ ကြောက်တာ။
အရပ် ၅ ပေ ကိုး ရှိတဲ့ ရှမ်း လေး ဖြစ်တာခြင်း တူရင် ကို ချစ်စရာကောင်းတာမှာ စိုင်း က အပြတ်အသပ်ကွာတယ်။
စိုင်းစိုင်း ထူ မှ ထ မယ်။
ချစ်မွှေးပါလို့ ကို မမြင်ဘူး ပဲ ကယ်တင်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူတွေ စဉ်းစားကုန်ပြီ။
MRT စီးရင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ ခုံနား မသွားဘူး။
ထ ထ ပေးတတ်ကြလို့။ :hee:
အနော် တော့ ခု ကတည်း က ရှောင်ပြီ ချစ်မ။
ဘယ့်နှယ်တော်. Pregnant Lady တဲ့
ဒီ ဗုံ တီး မှ ငို ချင် စိတ် ပေါက် တာ ဘယ် ၂ ခါ ရှိပြီတုန်း မသိ။
ရှိတယ်။ ရှိတယ်။ ဘာလို့ မရှိရမှာတုန်းးးးးးးးးးးးးးးးး
ခု ဖွေးဖွေး နဲ့ ဗမ်ပိုင်းယား ကား ရိုက်နေလို့။
ဒီက ရွာသူတစုလည်း ဖွဘုတ်တော်ဂျီးမှာ
ခရီးသွားရင် အမြဲဝတ်သင့်ကြောင်း အကြံပုပါတယ်..
မိုက်မိုက် အကြံပု တာ နော်။
ဆွိတို့ စံပြုရမဲ့အရာတွေကတော့ လွဲချက်ရယ်၊ လူချစ်လူခင်များချက်ရယ်… (အနီမှာဆိုထိပ်… ဆွိဆွိ သိပ်တော်)
ဒီ လူ အညင်ကတ်တဲ့ အနီ ကျမှ ထိပ်ဆုံးတဲ့။
ဘာပဲ ပြောပြော ကိုကြီးခ လက်ဆောင်ကို ယူဦးးးးးးးးးးမှာ။
နည်းနည်းပြန်ဖြည့်ပေးမယ်..။ ဟီးဟီးး အဖြစ်စုံက အဲဒီတစ်လမ်းလုံး ၂ယောက်သားပြောတဲ့စကားတွေမှာ ကျောင်းက ဆရာအတင်းလည်းပါတယ်..။ မန်းလေးက မိတ်ဆွေတချို့အကြောင်းလည်းပါတယ်…။ ၀တာ ပိန်တာလည်းပါတယ်..။ လှချင်တာ အလှပြင်တာလည်းပါတယ်..။ ဟိုလူကတော့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် တစ်ချက်တစ်ချက်လုပ်သားပဲ..။ ကိုယ်က အရှိန်နဲ့လှိမ့်နေတာ..။ ဆွိနဲ့ ဟိုလူက ဘေးကပ်လျက်၊ ကိုယ်က မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ဒစ်စကောင့်ပေးနေတဲ့အ၀တ်အစားအကြောင်းရောက်သွားတော့မှ ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်လေးကိုထုတ်ကြွားတာ..။ အတွင်းတစ်ထပ် အပြင်တစ်ထပ်ဆိုတာလည်း လှန်ပြလိုက်သေးတယ်..။ ဒီအင်္ကျီပုံက အမတို့လိုပိန်မှလိုက်တာ ဆွိက နည်းနည်းဝနေတယ်လို့ပြောတော့ အားကျမခံ ပြန်ပြီး အာရိုက်မိတာ..။။ ဗိုက်မထွက်ဘူးဆိုတာတောင် ရောက်ခါစကလောက်တော့ မချပ်တော့ဘူး ဒီလိုလေးကိုင်ကြည့်ရင် အဆီနည်းနည်းရှိတယ်လို့လဲ ဗိုက်ကို နမူနာ ကိုင်ပြလိုက်သေးတယ်..။ ဟီးဟီးးး ရှက်တာ..။ ပြီးတော့ မျက်နှာကြောင်းရောက်သွားတယ်..။ မျက်နှာဖောင်းတာပိန်တာ..။ ဒီတော့မှ ဘေးက ရွှေမင်းသားက အကြံတော် ထပေးတော့တာပဲ…။ အဲဒါ ဆွိနဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်တာ..။ နေခြည်က လွဲတတ်ဘူး တကယ်..။
ဟုတ်တယ်။ ခြည်ခြည်ပြောတဲ့ တိုင်း ပဲ။
ဧကန္တ နံပတ် ဖိုက် က ခြည့် ကို ရှူ ခိုင်းတာ နေမှာ။
နေက် တစ်ခါ လူရွေး ပေါင်း ပါ ဗျာ..
ကျုပ် တောင် ..
နာ နဲ့ ဒီလို လိုက် လွဲနေရတာကို ပျော်နေတဲ့ သူတွေ တစ်ပုံကြီးးးးးးး
ဟင့်ဟင့် ဂျီးတော်ဆွိလို ချစ်ခင်သူတွေတော့ မပေါ ဘူး။ ဒူပေဒါပေခံတဲ့ သူငယ်ချင်း နဲနဲဘဲ ရှိတယ်။ ရှိတဲ့သူတွေကလဲ ရွံကြောက်နဲ့ နားအေးပြီးရော ပြန်ရန်မတွေ့ကြတာ။ ငါး က ရှုရတာဟုတ်ဘူးလေ။သောက်ရတာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။ မှတ်မှတ်ရရ ငါး ၄ပုလင်းလောက်သောက်ဖူးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီလိုအချိန်လောက်။ အလုပ်က ဖိအားတွေ ရယ် မိုးမိတာရယ်ပေါင်းပြီဖျား။ ဆေးခန်းသွား မပျောက် နောက်ဆေးခန်းပြောင်း။ ချောင်းဆိုးတာလဲ မရပ်တော့ ငါး ၄ ပုလင်း ပိုက်မိတယ် ဆေးခန်းလေးခုက။ အလုပ်တွေကမနိုင်တော့ လူကအိပ်မရ။ တချိန်လုံးနိုးနေတော့ အဲ့ဒီ ငါးတွေ ချည်းလိမ့်လိမ့်သောက်တာ ဆရာဝန် အညွှန်းထက် ပိုသောက်ပလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါး က ပဲလက်မှိုင်ချသွားရလောက်ခေါင်းမာလွန်းတဲ့စိတ်။ အဲ့တော့ ဝိုင်ပြောင်းသောက်။ ဟီးးဟီးး
ငါး က သောက်ရတာ ကွန်မက်သာဇင် ကို ပြောတာဟုတ်?
ကွန်ပစ်တယ်ရော ပြောကြတယ် ထင်တယ်။
သောက်ပြီး သူ မူးတာ က တစ်မျိုးးးးးးး
အတော် အိပ် လို့ ကောင်းတာတော့ သိတယ်။
ဟို ငနဲ ပြောတာ ဒါ ကို ပြောတာမဟုတ်ပဲ၊ နံပတ် ဖိုး ကို ရွဲ့ပြီး ပြောတဲ့ နံပတ် ဖိုက်ထင်ပါရဲ့။
ဆရာဝန်တွေက အဲဒါသောက်ပြီး ကားမောင်း စက်မောင်း မလုပ်စေချင်ကြဘူးးးး
စိတ်ကသာ နိုးကြားမှာ။ လူက ထိုင်းသွားရော။
ဆိုက်ထဲသွားရရင် ဂရုစိုက်ပါ လေးလေးကြည်။
လွဲသမျှ ကို သည်းခံ၊
စားသမျှ ကို ဒကာခံ၊
ဝယ်သမျှကို ဒဏ်ခံ နိုင်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါလေ။
နံဘေးက ထိုင်နေတဲ့ ကောင်လေးက အတွေ့ အကြုံရှိတယ်ထင်ပါတယ်..။
ကေဇီ့မျက်နှာကြည့်ပြီး ၄ အဆင့်လောက်နဲ့ဆေးမတိုးနိုင်ဘူး ထင်လို့ပိုမြင့်တဲ့နံပါတ် ၅ ကို ညွှန်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…။
မျက်နှာချစ်ရှိပြီး စန်းပွင့်သူ အတွက်ကတော့ ဆေး အဆင့်နံပါတ်ရွေးပေးသူတောင့် …အသင့်ဘဲနော်..။
ဒီလူဂျီး ဒီ ထိ လာ ရွဲ့တာလား ဟမ်??
အဲလာ အနော့ကို ရွေးပေးတာဟုတ်ဘူးးးး
ကျနော့ အမ ပိန်ပိန် နေခြည့်ကို ရွေးပေးတာ။ ခွိ
ဦးကြောင်နဲ့ရထား အတူစီးရင် အဲဒီအင်းကျီအပွ အဝတ်နဲ့နော်.. တော်ကြာ ခရစ်စတယ်လှိုင်းဂလေး မြင်ပီး အထင်လွဲသွားမယ်…။ သူနဲ့ဦးကြောင် you dog မှာ…
ဒါဦးကြောင်ရဲ့ ဗိုက် ဟုတ်ပါဘူးးးးးးး
ကွကိုယ် တွေ့မရှောင်စားထားလို့ ကြီးလာတဲ့ ဗိုက်ပါ။
အစားအသောက်ဆိုင် တွေ့သမျှ မရှောင်တဲ့ တွေ့မရှောင် ဇာယိ!!
အဲလို ခရစ်စ်လေးဂို စဂါးကြမ်းကြမ်းဂျီး အပြောနဲ့… ရှက်သွားမှာပေါ့…။ သူနဲ့ဦးကြောင် you dog မယ်ဆိုဒါ အယူရသေးဗူးလေ…။
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ခိုင်လေးရယ်.. ရီ လည်း ရီရတယ်..
မျက်လုံးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး မြင်ပီးတော့ကို သဘောကျနေဒါ..
၀ သောသူကို ကြင်နာကြတာပါ.. မွန်ကစ်လဲ စားသမျှ ဗိုက်မှာ လာစုတယ်တော့.. အစာအိမ် ထဲ ဟုတ်ဘူး.. ဗိုက်အဆီ…
စကားမစပ် ဦးကြောင်က you dog မှာ you dog မှာ နဲ့ ညာပြောနေဒယ်.. ဦးကြောင်ဘဲ ညန်ညန် you dog.
မွန်ကစ်လေး ရွာထဲ ဝင်လို့ ရပြီလားးးး
ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီ ပါး က အင်္ကျီ အပွ ဝတ်လို့ကို မရတာ။ ဟိ။
ဗိုက်ခေါက်ကတော့ ထိုင်နေရတဲ့ အလုပ်တွေက ပိုဆိုးတယ်။
ခု သတိထားပြီး နေနေရတယ်။
ကိုယ့်ပျင်းချက်ကလည်းဟိုနား ဒီ နားကို လမ်းမလျှောက်ချင်။
Pregnant ladyေိေိေိ
အော် အလွဲတွေ အလွဲတွေ
ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ နေကျ ပက်ဝန်းကျင်မဟုတ်တဲ့နေရာဒေသက
MRT တော့မစီးဖူးဝူး…ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားစီးရင်တော့…..အရပ်တိုတိုနဲ့ ကောင်မလေးတေတက်လာရင်….
အလိုလို သနားစိတ်ဝင်လာတာ…ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ တန်းလဲ ပေးကိုင်လို့မရ (အဟိ)
ဆိုတော့ ထိုင်ခုံနောက်မှီကို ကိုင်ထားမိရင် လက်ဖယ်ပေးဘီးသားကိုဖစ်လို့ … (အကျင့်ပါနေတာ)
သို့သော် ဒေါက်ဖိနပ်စီးတာတောင် တန်းမမှီနိုင်တဲ့ မမတေ ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့ ကို့ခြေထောက်လာနင်းရင် ကားပေါ်ကနေ ကန်ချချင်တာကလား
ချွေအိ က မွမွကို စောင်းပြောတာလားဟမ်?
ပထမအလွဲကိုလည်းရယ်လိုက်ရတာ.. စင်ကာပူမှာကမြန်မာများတော့ နောက်ဆိုသတိထားတော့ မမခိုင်ဇာရေ.. ပထမအခေါက်စင်ကာပူကိုရောက်တော့ သင်္ကြန်အချိန်.. NTU မှာလုပ်တဲ့သင်္ကြန်သွားတယ်.. မြန်မာတွေခန်းမအပြည့်ပဲ.. အဲဒါတောင်..ကျောင်းသားအများပိုင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
အဲ့ပထတစ်ခေါက်က ကြောင်ကြီးကို ပွဲထုတ်ပြီး ကျော့်သာဆို ဆိုပီး
ပန်နဆူလာမှာ ပန်းကန်ထူထူ နှစ်ပြားနဲ့ ထားဒွါးလို့ ဂေးလမ်းမှာ ပြေးနမ်းခဲ့ရဒါပေါ့.. .. ခရစ်စတီလေးး..
မြန်မာပွဲ သွားလိုက်ရင် ကိုယ်တိုင်ကို အံ့ဩတယ်။။
ပြောသာပြောရ ကိုယ့်ကျောင်း က ဆို တစ်ကျောင်းလုံး ဒီမှာလား အောက်မေ့ရ။
အာရို အာရို မကေဇီ တို့ မနေခြည်တို့ အဖြစ်ကတော့ အဟိ အဟိ ဒချိ ဒချိ
ရီလိုက်ရတာဖတ်ဖတ်မောရော အဲလို အဲလို
မကေဇီ က အပျိုကြီးလား။ တကယ်ပြောတာလား။ ဟိုအရင်က ပို့စ်တွေမှာ — အိမ်ကမင်းသားကြီး — ဆိုလား ဖတ်မိလိုက်တယ်။ အမပဲ အမှတ်မှားသလား မသိဘူး။ မကေဇီက သားတစ်ယောက် အမေ မဟုတ်ဘူးလား။ အမလည်း ဂဇက်ကို အူရားဖားရားဖတ်ရတာ ဆိုတော့ သိပ်မကျေညက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အပျိုကြီး ဆိုတာ တကယ်ပြောတာလား။
ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းက.. ဆွိမမသူများတွေကိုပုံပြောဖူးတယ်.. သများတောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက် ရသေးတယ်..
အဲလာ ပုံပြင် ဟုတ်ဘူးးးးး ခရစ်(စ)
တစ်ချို့တွေ ငိုတာ ပို့(စ) ဖတ်ရင်း တစ်ရှူးတစ်ထုတ် ကုန်သတဲ့ကွယ်။
ဝင့် ရေ။ ဝင့် ရေ။
မင်းသားကြီးဆိုတာ ကျနော့ ဘော့(စ) ကို ခေါ်တာပါဗျာ။
တခြား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာက ရွာထဲမှာ ပို့(စ) တင်ဘူးပါတယ်။
ကျနော့ အပြင် Life ဟာ ကျနော် ရေးချင်သလို ရေးတဲ့စာတွေ ကော်မန့်တွေကို လွှမ်းမိုးမစိုးလို့ ရွာထဲက သိသင့်သလောက်ပဲ ကျနော်ပြောထားပါတယ်။
ကျနော့ Identity ကိုလည်းဖျောက်မထားပါဘူးဗျာ။
နေရပ် အမှန် အကုန်သုံးထားတာမို့ ဒီထက် အသေးစိတ် သိချင်ရင် စုံစမ်းဖို့ အလွယ်လေးပါနော့။
ဆောတီးပါ ညီမရေ။ အမက ဖေ့ဘုတ် မ၀င်ထားမိလို့ပါ။ ဖေ့ဘုတ်ဆိုတာက အချိန်ဖြုန်းစက်လို့ သိထားတာနဲ့ပဲ မ၀င်ဖြစ်တော့တာ။ နောက်အားမှပဲ ၀င်ပါတော့မယ် ညီမရေ။
ကျော်. ပညာအများကြီး အဲ့ကသင်ဖူးတယ်.
အနော့ အတွက်လည်း အဲလာ အဝေးသင် ပညာရေးပဲ။
ကျနော့ မြင်ဆရာ တော်တော်များများက အဲဒီမှာ။
ဟိဟိ.ဆွိမမ တော့ စင်ကာပူဆွိ ပေါက်ပြီ. ၂.၂ မီလီယံတောင်နော်။ ဟီးး မင်းသားကြီးဆိုတာသူ့ရုံးကမန်နေဂျာကိုပြောတာဖြစ်မယ်။
မင်းသားကြီးဆိုတာ သူဌေးကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီ။
ဂျာကြီးကို မဟာရန်သူ အချစ်တော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။
နောက်မှ သူ့ နဲ့ ကိုယ့် အကြောင်း သီးသန့်လာမယ်။
Buy one get one free ရထားတဲ့သူဆိုတော့ ဆုကြီးထီပေါက်တာပဲ ပေါ့ ချစ်မ။
တကတဲ နီကိုရဲနဲ့မြန်းအမျိုးတော်သလားမှတ်ရတယ်အေ။ ဒါနဲ့မြန်းတောင် အိုက်ဒီအင်္ကျီပွကြီးတွေဆက်ဝတ်တုန်းလားအေ။ ရီလိုက်ရချက်
နေရထိုင်ရ သက်သာတာကိုး မွသဲရေ။။။
ဒီထက် ပို ပြောရင် သိပ် မဟန်တာမို့
ဘာမှ သိပ် ပွားတော့ဘူးနော်
အာလဖွားယီး ရဲဇားဇဂါး လိုက်ပြောတာလည်းခံဖူးသလို. အရူးမလိုက်ကပ်တာံည်းခံရဖူးတယ်.
အဲ့ဒါတွေကြားပီး သာထိန်းကမောင်ဂီ့ကို မှာတယ်. မင်း ဟို့စတို. လုပ်မစားရဝူးနော်. တဲ့
သေဇမ်း. သူများလို ရုံးမှန်မှန်တက်ပါတို့. ဘာညာအမှာမခံရဝုး. ဟီး.
ရှက်လည်းရှက်ပါတယ်လေ နောက်မှရေးပါအူးမယ်. အဲ့အကြောင်းတွေ.
ဟို အလွဲ (အဲလေ) အဲဒါ က လွဲတယ်ပြောဖို့ကို ခပ်ခက်ခက်!
ဖတ်ပြီး သဘောကျလွန်းလို့ တခွိခွိနဲ့။
အဲ့ဒါ ဟိုထွား၊ဒီထွား ရှက်တတ်သူများစတိုင်။
ခါးအပွစည်း၊အပွတင်ဖုံး၊ပွပွမှန်သမျှ ၀တ်တာကို တောဂိုက်တဲ့။
မြို့စတိုင် အရှိအတိုင်းပြစေချင်သတဲ့။ ဘိုပြင်ရပါ့
အရင်ကတော့ ဖစ်တင်မှ ဖစ်တင်ပဲ။
စလုံးရောက်ပြီးမှ အဲ(ရ)ကွန်းမှာ အေးတတ်တာရော စိတ်လွတ်လပ်ချင်တာရော နဲ့ အဲလို ပွပွဖုံးဖုံးဖိဖိ များသွားတာ။
အရှိအတိုင်းကို သဘောကျပြီးမှ ပြင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့လို့။
ပြောင်းလဲစေချင်ရင် ဆွိ ဆီ သွားမှာလို့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်။
ဟိုမိုက်ကြည့်ကြည့်တဲ့ ဒါ့ပုံထဲက အိန်းဂျီဖားလားဂျီးဒွေမျိုး ဝတ်လို့မို့
ဟိုလေဒီလို့ အပေါခံရဒါ ….
နောက်ခါ အိုက်လိုဟာဂျီးဒွေ ဝတ်နဲ့ဒေါ့ …..
စင်ဂါပူက လူဒွေ ခေတ်မီဒယ်ဆိုဘေမယ့် …
လူကဲခတ် အတော် ညံ့ဂျဘေဒယ် …
ဒီနေရာမှာ ညန်မာပြည်က လူဒွေဂို မှီဖို့
နောက် အနှစ်ငါးဆယ်လောက် ကျိုးစားလိုက်ဂျအုံးလို့ …